UPeter M. (ovela kuloo dade othembekileyo kuJerenen Pauw) uphinde wabanjwa: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Juni 2019	• 3 Comments
Uvumela owesifazane eneempawu eziyimfuneko ze-10 imizuzu UYeren Pauw etafileni kwaye lonke elaseNetherlands liqinisekile ukuba uPetros M. ngenxa yokungabikho kwe-oksijeni ekuzalweni kuye kwaba yingozi kangangokuba ufuna ukwenza konke kunina ngaphandle kweyeza. Ukanti udadewethu utyelela uPetros phantse nganye iveki, kuba akukho nto iphazamisekile kubudlelwane bakhe noPetros emva kokusongela uMama. Ngaba ayinangqiqo kuwe? Ewe, xa kuhla ukuzisa imithetho emitsha ongeke wamukele ngaphandle kwayo yonke into (enokwenzeka). Ngoko ke uPeter M. ngoko ngokweendaba wayeka kwakhona (ubuncinane obangela ukuba ibali liphinde lithembeke).
Mhlawumbi le ntombi kunye "nomzalwana onobuqili" baye bafumana ingxowa yemali yokwenza igalelo kumthetho wesigqeba osisigxina samapolisa, ngoko ke akukhawulezi nje ukufumana uYudas imali, kodwa ke umdatshi waseDutch unokuthanda ukwenza oko. .
UMzalwan 'uPetros akadingeki ukuba abe khona, kuba iifoto kunye nevidiyo zinokusekelwe kwidade kwaye zenziwe ngokusebenzisa isofthiwe ejulile. Nangona kunjalo, iteknoloji iya kude kube kude nokuba udade kaPetros akwaziwa ngokupheleleyo kumazwe onke aseNetherlands, kuba ubuso bakhe bunokuthi bufikelele kwixesha langempela kwitafile zikaJeren Pauw ngokugqithisa ubuso. I-TV kwaye ngoko awukwazi ukuba uyintoni (njengoko kuchaziwe kuyo eli nqaku). Ukususela kumzuzu we-19e Ukusasazwa kwePeacock Pauw empeleni ubonisa ngaphandle kweengqungquthela okanye ukugubungela ukuba baneentlobo zeesofthiwe kwii-studios apho ukuze umntu abonakale ekhulile, umzekelo. Ngaloo mzuzu malunga nexesha elitsha lomhlalaphantsi karhulumente kwaye uJeren uyakhawuleza ukuzisa imifanekiso yeendwendwe zeetye zeendwendwe, ezibonisa indlela abajonga ngayo malunga nomhlalaphantsi weminyaka.
Ii-studio ze-TV, uJohn de Mol kunye no-ANP nazo zonke iprogram ongazicingela kwaye kutheni bangayisebenzisi ukukhohlisa abantu? Ingaba ucinga ukuba akubi kakhulu? Emva koko qwa lasela ukuba yeyiphi imilinganiselo eya kuqhutyelwa emva kwithuba elizayo. Ukuba ukuphunyuka kukaPeter M. kuya kuqinisekisa ukuba amalungiselelo ekhefu awayikhethwa kunye nokuba intsapho iya kuthethwa kwisigqibo sokubamba umntu, yayifihliwe kule lahleko. Kwaye kwakufuneka iqinisekise i-Anne Faber ibali kwakhona. Ukongezelela, kucacile ukuba ukususela ngoku kwiiklinikhi kufuneka ziphendulelwe kwiintolongo. Ukufunda apha kwakhona indlela amaqela amaninzi okubulala (mhlawumbi ukusebenza kwengqondo) kufuneka akhokele ekutshintshisweni komthetho omtsha kwaye ngokuchanekileyo.
Zonke iimeko eziphambili okwangoku zixhaswa ngamajelo anecandelo eliphindwe kabini kwaye enye yalezo zibhobho zimbini kukuba kufuneka sibe ngabacuphi abaninzi kumntu onikwe ingxelo ephosakeleyo (nge iSherlock app). Ukuze nabo babe ngabaselula abaselula lawulo oluqinileyo baninzi bazama ukuphunyuka kumaziko okunyamekela ulutsha kwaye kungabakho abantu abaza kutshabalala ngokusasazeka kwi-gulag, abaninzi abayi kuphazamiseka. Ukungcatshiswa ngoko kuba ngumdlalo wePokémon wokuzingela. Abantu bahlanjululwa ngengqondo kunye nemiboniso yeendaba ezinika impembelelo yokuba konke kusebenza ngokufanelekileyo. Ukulanda olo luhlelo lunikeza nexesha elipheleleyo likarhulumente ilungelo lokusebenzisa ikhamera yakho, imakrofoni kunye nedatha yendawo, ngoko uya kukhishwa ngokusemthethweni, kodwa ngaphandle.
Okwangoku, wonke umntu onokwabelana ngamaphepha enje kwi-Facebook uya kuhlaselwa yimiqulu yombuso ebiza ukuba ngumhlobo, ulwalamano, ilungu losapho le-protagonist, ukuphazamisa abo banokwabelana ngamanqaku kwaye bahlale bephethe imisebenzi. Ngaphantsi kwezi profayile zentlalo yoluntu zidla ngokuba yi-Inoffizieller Mitarbeiter okanye uthetha kummeli we-AIVD ofihla emva kwiprofayili enzulu (edibaniswe nezinye iiprofayile ezinzulu, ukwenzela ukuba loo projekthi ifanele ibe nenethiwekhi yentlalo enokwethenjelwa). Ukubukhali kwezihlaselo kulukhuni kangangokuba abantu abaninzi abanakuze babelane nabo okanye bathanda amanqaku. Musa ukulima!
Ukufuna ngokukhawuleza lo msebenzi wasePBS osongela ubomi ovela kwiDen Kolder
UJos B. (Nicky Verstappen) I-PsyOp ngoku isetyenziselwe ukufuna iingxelo zabaxhasi kummeli?
tags: le, udoti, eziziimbalasane, ephosakeleyo, fu maneka, Jeroen, klinikhi, M., isigulane, Peacock, peter, zengqondo, ngasemva, sasazwa, zus
7 Juni 2019 kwi-08: 47
Ngaba ndinokuthi ndixelele ukuba kutheni udade odityanisiweyo kaPeter M. ngokuzithandela kuTV? Ngokuqhelekileyo wonke umntu akafuni ukuza kuTV xa ilungu lentsapho liceli ligcina iphrofayili ephantsi. Ngaba umntu unokundixelela ukuba kutheni uPetros M. owonakalisayo kwaye akakwazi ukusebenza ngaphandle kokukhulula amayeza? Liliphi igama logqirha eliyamphatha? Ngaba sele sele esethelevishini kunye noMbuso uPowula ukuba achaze? Ngaba ugqirha onjalo akachithanga okanye uphando?
Liliphi ilizwe elikhohlakeleyo, lihanahana? Sombulula kunye nabafana kwi-asap yeskripthi.
7 Juni 2019 kwi-09: 03
Ngokuqinisekileyo ibali elingakholwanga ngokupheleleyo. Omnye ongenakukwazi ukusebenza ngaphandle kweyeza elinikwe ilingo lokutsala ukuze ahlalisane.
Ngokwenene ayenzi nantoni na.
Oo ewe kwaye ke ibali lelo "bhomu le-athomu" .. oko kunjalo yena ngokwakhe.
Bafika ngamabali akhulayo kunye namaqela angena kuwo ngenxa yokuba umntu uxelela ibali ekujonganeni ne-Jeroen Pauw kunye nazo zonke iindwendwe zeetafile nazo ziingcali zobuxoki eziqinisekisile ibali.
7 Juni 2019 kwi-10: 22
Into engaqondakaliyo, engakholwanga. Andicaci ukuba yintoni na ixesha elide likaPeter M. eliye lahlala ixesha elide ukusinda. Okanye ngaba sele beyibonise indlela yokuya? Yayidla ntoni na isiselo? Akukho ndlala, unxani, indlu yangasese? Ngaba le nto ihlawulwe Ngaba wayenomgca we-ankle? Kutheni na? Njalo.
« Ukufuna ngokukhawuleza lo msebenzi wasePBS osongela ubomi ovela kwiDen Kolder
Unokuzisa utshintsho kunye nokukhetha kwakho! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.196.672
I-US iyakuhlawula nini irhafu yemozulu kuzo zonke ezo bhombu baziphosayo?
UMartin Vrijland op Umnxeba ongxamisekileyo! Kufuneka sibeke imithombo yeendaba ngaphandle kokusebenza ngoku!
Ikhamera 2 op Umnxeba ongxamisekileyo! Kufuneka sibeke imithombo yeendaba ngaphandle kokusebenza ngoku!
Cubungula op Umnxeba ongxamisekileyo! Kufuneka sibeke imithombo yeendaba ngaphandle kokusebenza ngoku!
SalmonInClick op Ngaba i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi? UDe Telegraaf uneempendulo kuyo yonke imibuzo yakho!
SandinG op Ngaba i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi? UDe Telegraaf uneempendulo kuyo yonke imibuzo yakho!
Joyina amanye ama-1.634 ababhalisile